फ्रीवाला मौकामा आआफ्नै हचुवा दाबी
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिफ्रीवाला मौकामा आआफ्नै हचुवा दाबी
कति हाँस्नु ! कन्टिर–बाबू राजधानी खाल्डोमा दैनिकजसो हुने प्रहसन हेरेर परेसान छन् । कोही भन्छन् यो नाटक हो, कोही भन्छन् यो नौटङ्की हो, वास्तव यो हो चाहिँ के ? कन्टिर–बाबूले सुरुदेखिको पृष्ठभूमिको भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
कहिले उसलाई बोकेका छन्, कहिले कसलाई पछारेका छन् । कहिले कसलाई लछारेका छ, कहिले कसलाई हकारेका छ । तर जे गरे पनि सार्वजनिक रूपमा जग हँसाउने क्रियाकलापचाहिँ भाइरल भइरहेको छ । यसरी हँसाउने जोकरहरूको सङ्ख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएपछि मान्छेले मनले नचाहे पनि मुखले हाँस्नु त पर्‍यो !
तर फेरि सवाल उही ठाउँमा छ कि हाँस्नु त कति दिन हाँस्नु ? कन्टिर–बाबूमा हाँस्दा–हाँस्दै हुरुक्क हुन बेर छैन । अरे यार, सधैँको नारा–जुलुस अनि सडक प्रदर्शन । सबै कुराको कुनै न कुनै हद हुन्छ नि यार !
हुँदा–हुँदा बोलेको अभियोगमा कसैलाई सर्वोच्चमा ठिङ्ग्याएको छ, कसैलाई हनुमानढोका लगेर गुमुर्क्याएको छ । बिनाकाम मान्छेलाई दुःख दिएर गरिने दिनहुँका प्रहसन प्रदर्शनको पटकथा–लेखकलाई कन्टिर–बाबूको सल्लाह छ– फोटोमा देखिए जति सबै जनता झप्रम वा ओल्बाका पियोर समर्थकहरू हुन् भनेर चाहिँ कृपया नलेखिदिनुहोला ।
सोले फिलिममा असरानीले दिएको डाइलगजस्तो आधा पशुपति दर्शन गर्न, आधा खाल्डो डुल्न र बाँकी छिमेकीले भनिहाले, मर्दापर्दा काम लाग्ने उनै हुन्, जे परोस् जान्छु भनेर आएकाहरू हुन् ।
यस्तोमा प्रदर्शनकारी सबैले जनता जति आफ्नै पक्षमा भएको दाबी गरेको कन्टिर–बाबूलाई चित्त बुझेको छैन । सबै दल र नेताका प्रदर्शनमा जनताको बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ । कन्टिर–बाबू माथामा बामा हात राखेर सोचिरहेछन्– सिद्धान्त बुझेर, कारण बुझेर, कुरोको चुरो समातेर होइन, त्यसै फ्रीवाला मौका छोपेर पशुपति दर्शन सिद्राको व्यापार गर्न आएका जनता आखिर कसका पक्षमा छन् ?
ओल्बाको सभामा अढाई लाख थिए रे ! झप्रमको प्रत्युत्तरमा तीन लाख आए रे ! यस्तो हचुवा दाबी गर्ने आधार के हो ? गन्ने को हो ? दुई लाख मान्छे कटे भने भिड टुँडिखेल वरपरको वा नारायणहिटी सेरोफेरोको सडकले धान्छ ?
यता जनतालाई पनि के भन्नु ? गणेशमानसिंहले भने जस्तो भेडो भनौँ भने मान्छे रिसाउलान् । नभनौँ भने कोरोना महामारी जारी रहेको यो बेला अरू काम छोडेर, सुरक्षाका उपाय नअपनाई घण्टौँ भिडमा बस्नेहरूलाई के भन्ने ? कन्टिर–बाबू कुनै उपयुक्त शब्दको खोजीमा छन् ।
सडक प्रहसनमा सहभागी जनतालाई सायद अहिले फुर्सदै–फुर्सद छ, त्यही भएर उनीहरू लगे रहो, भिडे रहो झुनझुना भाइ भने जस्तो गरिरहेका छन् । यस्तोमा कन्टिर–बाबू विचार गरिरहेका छन्– कोरोना सङ्क्रमण जारी रहेको उत्कर्ष बेलामा गामबाट काम छोडेर फ्रीवाला पशुपति दर्शन गर्न आइपुगेका जनता खाल्डोबाट फर्किँदा के–के सनेस लिएर घर जाने हुन् ?
दाबी प्रहसन सडक